သော့ချိတ် ~ အာကာခေတ်ပိုင်
ကံကြမ္မာကိုလည်း အပြစ်မဆိုခဲ့ … တဘက်သက်ဆန်လွန်းတဲ့ ဘ၀ဇာတ်ဆရာကိုလည်း ငြိုးမာန်မဖွဲ့ခဲ့ပါဘဲ တွေ့ဆုံခြင်းက ကြေကွဲစရာအဖြစ် ပြောင်းလဲကုန်လေပြီ။ အင်ကြင်းမေ …. ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို ကိုင်လှုပ်သွားသူ … အချစ်တွေအကုန်လုံး သိမ်းပိုက်သွားသူ … အလွမ်းတံဆိတ်တွေ ရိုက်နှိုပ်ပေးခဲ့သူ … ထို့နောက် ထားရစ်ခဲ့သူ … လွမ်းလို့သေမသွားပေမယ့် သေအောင်တော့ လွမ်းနေရဆဲ … တစိမ့်စိမ့်ဆွေးပြီး တစိမ့်စိမ့်လွမ်းဆွတ်ကာ သတိရနေလျက် … ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိသည်။ အချိန်အခါ မဟုတ်ပါဘဲ မီးခိုးရောင်တိမ်တိုက်တို့က နေရာယူ ကြီးစိုးနေလေသည်။
သော့ချိတ်လေးများ မြင်တိုင်း နှလုံးသား၏အနာဟောင်းက တဆစ်ဆစ်နာကျင်လွန်းသည်။ ဒါဏ်ရာဘလပွနှင့် အသည်းက မခံစားနိုင်အောင်ဖြစ်နေချေပြီ။ ကျွန်တော်နှင့် အင်ကြင်းမေ ရင်နှီးတွေ့ဆုံပုံက ကဗျာမဆန်ခဲ့ပေမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်အဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ်-မန္တလေးတွင် ဂန္တ၀င်တွင်ခဲ့လေသည်။ သော့ချိတ်လေးများကို ချစ်မြတ်နိုးတတ်သည် အင်ကြင်မေနှင့် သော့ချိတ်လေးများကို တန်ဘိုးမထားတတ်သည့် ကျွန်တော် ဆန့်ကျင်ဘက်ခရီးကို မောင်းနှင်ခဲ့ကြပေမယ့် ဆုံမှတ်တစ်ခုမှာ တွေ့ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုဆုံမှတ်တွင် လွမ်းမောစရာတေးသွားများကိုသာ ရေးစပ်ရမည်ဟု ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး လုံးဝမသိခဲ့ကြပေ။ အခုတော့ …
လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် ၀ါသနာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု ရှိကြပေလိမ့်မည်။ တချို့က တံဆိပ်ခေါင်းလေးတွေစုရတာ၊ တချို့က ဘိနပ်၊ တချို့က အကျီ၊ တချို့က ဒင်္ဂါးပြားစသဖြင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပစ္စည်းများကို တစိုက်မက်မက် စုဆောင်းရန် ၀ါသနာကိုယ်စီရှိကြပေလိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူ အင်ကြင်းမေသည်လည်း သော့ချိတ်လေးများ စုရသည်ကို ၀ါသနာထုံသူဖြစ်လေသည်။ အစပိုင်းတွင် အမှတ်တမဲ့ဖြစ်မိသော်လည်း စာသင်ခန်းထဲ သူမ၀င်လာတိုင်း သူမကျောပိုးအိတ်မှ တွဲလို့တွဲလောင်း သော့ချိတ်များ၏ဆူဆူညံညံ အသံမျိုးစုံကြောင့် ကျောင်းသားအားလုံး သတိပြုမိကြသလို ကျွန်တော်လည်း သတိထားမိခဲ့သည်။ ထိုအချည်းအရာသည် မထူးဆန်းပေမယ့် သူမတွင် ထူးဆန်းသော အရာများ ရှိနေပါသေးသည်။ သူမ သိတတ်စအရွယ်ကတည်းက သော့ချိတ်လေးများကို စုဆောင်းလာခဲ့သည်မှာ အမျိုးအစား တစ်ထောင်ကျော်သွားပြီတဲ့။ ဒီသော့ချိတ်လေးက နိုင်ငံခြားက အန်တီက ပို့လိုက်တာ … ဒီသော့ချိတ်လေးက မွေးနေ့တုန်းက ဖေဖေက ပေးခဲ့တာ … ဒါလေးက ဘန်ကောက်ကို ရှော့ပင်ထွက်တုန်းက ၀ယ်လာတာ စသဖြင့် သော့ချိတ်တစ်ခုချင်းစီကို ထုတ်ပြကာ မမောနိုင် မပမ်းနိုင် တတွတ်တွတ် ရှင်းပြနေတတ်သည်။ အားလုံးက ကြွားဝါသည်ဟု မထင်သော်လည်း သူမ၏၀ါသနာကို အသိမှတ်ပြု ချီးကျူးကြစမြဲဖြစ်သည်။ သော့ချိတ်လေးများသည် သူမဘ၀ သူမအသက်ဆိုသဖြင့် ကျွန်တော် အံ့သြပြီးရင်း အံ့သြရလေသည်။
ကျွန်တော်နှင့် အင်ကြင်းမေမှာ ခုံနံပါတ်ချင်း ကပ်လျက်ဖြစ်သောကြောင့် ငယ်သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ ပြောမနာ ဆိုမနာ ဖြစ်ကြလေသည်။ သူမတို့ အဆောင်ကို ဂီတာသွားတီးလည်း မညည်းမညူတစ်ညလုံး အားပေးတတ်သည်။ ပိုက်ဆံပြတ်တိုင်း သူမဆီမှ အလွယ်တူ ချေးလို့ရသည်။ ကျောင်းလစ်ချိန်တွင် သူမက (Roll Call) ထိုးပေးထားသည်။ ကျွန်တော်အပေါ် အမြဲတမ်းကောင်ခဲ့သော သူမ၏စေတနာကို အသိအမှတ်မပြုခဲ့မိသည့်အတွက် အခုချိန်တွင် နောင်တ တနင့်တပိုးကြီး ရရှိခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ရင်နင့်စရာများ ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျင် …
“နေပါအုံး … သော့ချိတ်တွေကို မစားရက်မသောက်ရက်နဲ့ ဘာလို့ စုနေတာလဲ … ဘာလဲ ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင်ချင်လို့လား … ဒါမှမဟုတ် … ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့လား.. “ဟု စိတ်မရှည်စွာနှင့် မေးဖူးပါသည်။ သူမက ခပ်ပြုံးပြုံးနှင့် “ဂရင်းနစ်စံချိန်ဝင်ချင်လို့လဲမဟုတ်ဘူး … ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်လို့လဲမဟုတ်ဘူး … သော့ချိတ်လေးတွေရဲ့ဘ၀ကို သနားလို့ စုနေတာ … “
“ဘာ .. သနားလို့ဟုတ်လား … “
“အင်းပေါ … သော့ချိတ်လေးတွေဟာ သူ့ကိုယ်သူဆိုရင် တန်ဘိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် သော့မှာ ချိတ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် တန်းဘိုးထားအပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ် … သူ့ဘ၀ကို ပုံအောပြီး သော့မပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးတယ် … အဖြည့်ခံဘ၀လေးကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲတတ်တဲ့ သောချိတ်လေးတွေကို ငါသနားတာ … “ အင်ကြင်းမေ၏မျက်ဝန်းတွင် အရောင်များ တဖျပ်ဖျပ်လက်နေသည်ကိုတွေ့ရချိန်တွင် ကျွန်တော် ခေါင်းကို အတွင်တွင် ခါယမ်းမိရင်း “ရူးပါ့ကွာ … “ဟု ခပ်တိုးတိုးလေး မှတ်ချက်ချခဲ့ဖူးလေသည်။
“ဟိတ်ကောင် … အာကာ … အင်ကြင်းမေက မင်းကို ချစ်နေတဲ့ပုံပဲ … “
“ဟုတ်တယ် … အာကာ … ငါတို့က မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ သူ့မျက်လုံးတွေကို ဖတ်တတ်တယ်ဟ … နင်ဘက်ကသာ ဖွင့်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် သူလက်ခံမှာပဲ… “စသဖြင့် သူငယ်ချင်းများက အမျိုးမျိုး မှတ်ချက်ချသော်လည်း ကျွန်တော် ပြုံးနေလိုက်သည်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်ထက်မပို။ ထို့ကြောင့် ခံစားမှုမရှိ … လျစ်လျူရှုထားမိခဲ့လေသည်။
ကျွန်တော့်အသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ထုံးစံအတိုင်း ကန်တော်ကြီးတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းများကိုသာ ဖိတ်ကြားထားပြီး လက်ဆောင်မပေးရန် တားမြစ်ထားသည်။ တစ်ယောက်မှ လက်ဆောင်မယူခဲ့သော်လည်း အင်ကြင်းမေက ပါဆယ်ဘူးသေးသေးလေး ကျွန်တော့်ဆီသို့ ကမ်းပေးလေသည်။
“ဟာ … အင်ကြင်းမေ ငါသေချာပြောထားရက်သားနဲ့ … လက်ဆောင်မပေးပါနဲ့ဆို … “ဟု ကျွန်တော်က စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနှင့် ပြောချိန်တွင် သူမက မျက်နှာငယ်လေးနှင့် …
“ငါသိပါတယ် အာကာရယ် … ဒါပေမယ့် ဒီလက်ဆောင်လေးတော့ ယူပါနော် … “ဟု တောင်းပန်ခယကာ ပြောနေသဖြင့် လူအများရှေ့မှာမို့ နှုတ်ဆိတ် လက်ခံလိုက်ရလေသည်။
“အထဲက ဘာလဲ … “ဟု ပါဆယ်ဘူးကို ခလောက်ရင်း မေးလိုက်သည်။ သူမက လျှာလေးတစ်လစ်ထုတ်ရင်း “သိချင်ရင် ဖွင့်ကြည့် … “ ဟု ကလေးဆန်ဆန်ဆိုပါသည်။ ပါဆယ်ဘူးကို ခပ်မြန်မြန်ဖွင့်လိုက်ချိန်တွင် အထဲမှာ အသည်းပုံပလက်တီနံသော့ချိတ်လေး ထွက်လာလေသည်။
“ဟာ … ဘာများလဲလို့ သော့ချိတ်ကြီး … “ဟု စိတ်မ၀င်စားသလိုပြောလေရာ အင်ကြင်းမေ၏မျက်နှာမှာ သိသိသာသာ ပျက်ယွင်းသွားပြီး မျက်ဝန်းတွင် မျက်ရည်များစများ ရစ်ဝဲလာသည်။
“ဆောရီးဟာ … နင့်သော့ချိတ်လေးကို ငါသော့မှာ အမြဲတပ်ထားမယ်သိလား … “
သော့ချိတ်လေးကို ဆိုင်ကယ်သော့တွင် တပ်လိုက်သည်။ သူမ၏မျက်နှာ ပြုံးရိပ်သန်းသွားသည်ကို အခုချိန်ထိ မြင်ယောင်မိလေသည်။
“အာကာ … အကင်သွားစားမယ်လေ … “
“မစားချင်ပါဘူး … နင်တော့ အသုပ်တွေစား၊ အစပ်တွေစား၊ အကင်တွေစားနဲ့ တော်တော်ကြာ အစာအိမ်ထိနေလိမ့်မယ် … “
“လာပါဟာ … ထမင်းမစားချင်လို့ပါ … “
အင်ကြင်းမေက ဇွတ်ခေါ်တော့လည်း ကျွန်တော်မငြင်းသာ။ ထို့ကြောင့် ဘောင်းဘီအိပ်ကပ်ထဲမှ ဆိုင်ကယ်သော့ကို ထုတ်လိုက်သည်။
“ဟာ … ဆိုင်ကယ်သော့ ဘယ်နားထွက်ကျခဲ့လဲမသိဘူး … ပျောက်ပြီ … အဲဒါ နင့်ကြောင့် … “
ကျွန်တော်က လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးကာ ပြောတော့ သူမက ကျွန်တော်အား မျက်လုံးဝိုင်းလေးနှင့် ကြောင်ကြည့်နေလေသည်။
“ငါ့ကြောင့် … “
“ဟုတ်တယ် … နင့်ကြောင့် နင်ပေးခဲ့တဲ့သော့ချိတ်ကို ငါ့ဆိုင်ကယ်သော့မှာ တပ်ခဲ့မိလို့ အခုလိုသော့ပျောက်ရတာ … ငါဘာသာငါဆို ပျောက်မှာ မဟုတ်ဘူး … “
ဆိုင်၏မဆိုင်၏တော့မသိပါ။ ကျွန်တော် စိတ်တိုတိုနှင့် ပြောမိခဲ့ပါသည်။ သူမက မျက်ရည်များကျရင်း ခေါင်းငုံ့ကာ ငြိမ်သက်နေပါသည်။ ထိုမျက်ရည်များကို မသုတ်ပေးခဲ့မိသည့်အတွက် အခုချိန်ထိ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် အပြစ်တင်လို့ မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။
နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်း(က)တွင် သူငယ်ချင်းများ၏မြှောက်ထိုးပင့်ငေါ်ကြောင့် ကျွန်တော်နှင့်အင်ကြင်းမေတို့ ရည်းစားဘ၀သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ချစ်သူဖြစ်သည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူမက ကောင်လေးနှင့်ကောင်မလေး နမ်းနေသော အရုပ်သော့ချိတ်လေး ပေးပါသည်။ ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင် သူမအတွက် အချစ်ဗလာဖြစ်နေသဖြင့် ဘာလက်ဆောင်မှ မပေးဖြစ်ခဲ့ပါ။ ပေးရကောင်းမှန်းလည်း မသိခဲ့ပေ။ မှတ်မှတ်ရရ လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပဲ ပေးအပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုလက်ဆောင်လေးက …
“ဗိုက်နာလိုက်တာဟယ် … “
“နာမှာပေါ့ … အစာဆိုတာ စားချိန်တန်စားရတယ် … အလုပ်သင်ဆရာဝန်တောင်ဖြစ်နေပြီ … ကျန်းမာရေးကိုမလိုက်စားဘူး … “
သူမ၏မျက်နှာမှာ အခုတလော သိသိသာသာ ချောင်ကျနေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ဗိုက်လည်း ခဏခဏ အောင့်နေသည်မို့ သူမအား ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အစာအိမ်ဆေးထိုးပေးလိုက်ရသည်။
“ငါတို့ ဆရာကြီးတွေကို ပြကြည့်အုံး … ပေါ့ပေါ့ဆဆမနေနဲ့ … “
ဒါ သူမအတွက် ကျွန်တော်၏ပထမဆုံး ကြင်နာမှုစကားတစ်ခွန်းဖြစ်မှန်း သူမကော ကျွန်တော်ပါ ကောင်းကောင်းသိပါသည်။ သူမက ကျွန်တော့်အား ပြုံးပြီး စိုက်ကြည့်နေသည်ကို တွေ့ရလေသည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော် ပြန်မပြုံးပြဖြစ်ခဲ့ပါ။
“ငါတို့ကျောင်းပြီးတော့မယ်နော် … နောက် တစ်လဆိုရင် ဘွဲ့ယူရတော့မယ် … “
“အာကာ … နင်ငါ့ကို ချစ်လားဟင် … “
သူမဘက်သို့ လှည့်ကြည့်မိသည်။ ဘုရားရေ … သူမအသားအရေတွေက ဖျော့တော့နေပြီး ခန္ဒာကိုယ်က ပိန်လှီနေပါလား … မျက်တွင်းများနှင့် နားထင်များက သိသိသာသာ ချောင်ချကျနေသည်။ ကျွန်တော် အကဲခတ်နေသည်ကို သိနေသည်ထင်သည် သူမက ပြုံးပြီး …
“ဘာတွေများ အဲဒီလောက်အထိ စိုက်ကြည့်နေရတာလဲ … ငါမေးတာလည်းမဖြေသေးဘူး … ငါကို ချစ်လားလို့ … “
ကျွန်တော့်အဖြေသည် အေးစက်စက်နိုင်မှန်း သူမရိပ်မိသော်လည်း သူမက ကျေနပ်စွာပြုံးရင်း အဝေးသို့ ငေးကြည့်နေလေသည်။ သူမ၏မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်စများကို ကျွန်တော် လှစ်ခနဲ တွေ့ရှိလိုက်ရလေသည်။
“ဟုတ်တယ် … အာကာ … အင်ကြင်းမေ အစာအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နေတာ … အစကတည်းက နင့်ကို ပြောမလို့ဘဲ သူက မပြောနဲ့ဆိုလို့ … မပြောဖြစ်ခဲ့တာ … အခုတော့ဟာ သူနောက်ဆုံးအချိန် …. “
“တော်ပြီ … မပြောနဲ့တော့ … အခု သူဘယ်မှာလဲ … “
“ဆေးရုံကြီး အထူးကြပ်မှတ်ကုသဆောင်မှာ … “
“အာကာ … “
သူမက အားတင်ကာ ပြုံးနေသော်လည်း အသံက ခပ်ယဲ့ယဲ့နှင့် တိုးလျနေသည်။ သူမ၏အေးအေးစက်စက် လက်ချောင်းလေးများအား ကျွန်တော် ဆုပ်ကိုင်ထားမိသည်။
“အင်ကြင်းမေ … ငါ … ငါ … “
ကျွန်တော့်အသံတို့ ထစ်၊ အ၊ တုန်ယင်နေသည်။ သူမက အသက်မှန်မှန်ရှူသွင်းရင်း ကျွန်တော့် ပါးပေါ်တွင် စီးကျနေသော မျက်ရည်များကို ခပ်ဖွဖွလေး သုတ်ပေးနေလေသည်။
“အာကာ … ငါ့ကိုချစ်လားဟင် … “
ကျွန်တော့်ရင်ထဲတွင် ဆို့နစ်ကြေကွဲသွားရကာ တဘက်သို့ လှည့်ထားမိသည်။ မျက်ရည်များကို လက်ခုံနှင့် အလျင်စလို သုတ်လိုက်ရင်း …
“ချစ် … ချစ်ပါတယ်ဟာ … “
သူမက ကျွန်တော့်အား စူးစိုက်ကြည့်နေရင်း ကျေနပ်စွာ ပြုံးနေပါသည်။ ထို့နောက် လက်ထဲတွင် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားသော သော့ချိတ်လေးတစ်ခု ကျွန်တော့်ဆီသို့ ကမ်းပေးလေသည်။ အသည်းပုံသော့ချိတ်လေးပေါ်တွင် “I LOVE YOU”ဟု ရေးထိုးထားသည်ကို တွေ့ရလေသည်။
“အင်ကြင်းမေရယ် … “
အင်ကြင်းမေ လူ့လောကကို စွန့်ခွာသွားသည်မှာ တစ်လတိတိပြည့်ခဲ့လေပြီ။ ကျွန်တော့်အချစ်တွေလည်း သူမနှင့်အတူ တစ်သက်တာ လက်ဆောင်အဖြစ် မြေမြှပ်သင်္ချိုလိုက်လေပြီ။ အခုချိန်တွင် သော့ချိတ်လေးတွေ မြင်တိုင်း အင်ကြင်းမေအား သတိရသည်။ လွမ်းရသည်။ ဆွေးရသည်။ ငိုရသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော် သော့ချိတ်လေးတွေ စုတတ်ခဲ့လေပြီ။
2014, April, Halo magazine
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် September 11, 2012 at 12:25 PM
ခင်ဦး January 8, 2013 at 9:31 AM
အမ်းးး ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ဖတ်ခဲ့တယ် ဆရာရေ
htaw oo January 25, 2013 at 6:59 PM
ဆွေးလှတယ် ကွယ်...ဟီ ဟိ...
ဖတ်ပြီး မျက်ရည်တောင်ကျ ရတယ် သနားလွန်း လို.
အထူး ကြပ်မတ် ပါ အစ်ကို